Ungagadzirira sei nzvimbo yekutsvaga injini yekugadzirisa?
Fungidzira mamiriro ezvinhu awakashandura kurota kwako muchokwadi ndokutanga iwe webhusaiti. Iye zvino, inguva yekuvandudza kuvepo kwako paIndaneti uye kukoshesa vashandi vako vanogona kutora nzvimbo yako itsva. Zvechokwadi, nzvimbo yako yekusimudzira webhusaiti haikwanisi kuitwa muzuva sezvazvinotora nguva yekutsvaga kutsvaga kuratidza nzvimbo yako. Zvisinei, iwe unogona kukanganisa urongwa uhwu uchishandisa tsvakurudzo yekugadzira injini. Seo ndiyo nzira inopedza nguva, haungagamuchiri mhinduro pakarepo. Kunyange zvakadaro, kuvandudzwa kwekutanga kwekuvandudza iwe unogadzira mushure mekutsvaga kwekutsvaga kwewebhu kwako kunogona kuva nechinje chekuita kwebhizimusi rako rekutsvaga. Semuenzaniso, iro rakakodzera rakasarudzwa kusanangurwa rine zvakakosha pahupenyu hwako hwemangwana huripo sevangangodaro vatengi vachawana nzvimbo yako nemashoko ekutsvaga. Iwe unofanirwa kuvaka shanho yakanaka yekusimudzira panguva imwechete kuchengetedza nguva munguva yemberi uye kuderedza kudiwa kwekugadzirisa chero zvikanganiso zvewebsite.
Muchirongwa ichi, uchawana mazano kune avo vaiti vepanzvimbo vakangotanga webhu. Aya mazano anotevera achakubatsira kugadzira yakanaka yekutsvaga injini yekugadzirisa hurongwa chero nguva paunotanga webhusaiti itsva kuti uone kuti yakagadzirwa kubvira pakutanga kutanga kunaka kwemashamba kubva kunjini dzekutsvaga.
Ndingaita sei SEO yangu yakangobudiswa webhusaiti?
Unofanirwa kuumba webhusaiti yako kuitira mazano akakodzera ekuvandudza mararamiro ayo. Peji imwe neimwe yewebsite yako inofanira kutsvaga yakagadziriswa, yepamusoro-volume keywords kuti ibatsire tsvakurudzo yekutsvaga inoshandura zvinyorwa zvako. Iwe unofanirwa kuputsa pasi iwe webhusaiti yako yakagadzirwa muzvikamu zvakasiyana zvakasiyana. Mhando imwe neimwe inofanira kuve yakagadzirirwa pane imwe nguva yekutsvaga kuwedzera mukana wako kuti uende kuGoogle TOP nemibvunzo yakasiyana yakasiyana. Website yekugadzirisa ine zvakawanda zvekubatsira. Chokutanga pane zvose, inogadzira nheyo yakajeka uye inotsvaga kutsvaga izwi pane peji yewebhu yega yega, panzvimbo yekuti peji yepamusoro iongorore mamwe mazwi makuru. Iri rudzi rwekutsvaga runopa huwandu hwehutano hunoenderana.
Nhasi, zvigadzirwa zvakakodzera uye zvehutano zvinoshanda senzvimbo inokosha yeGoogle. Iyo yakagadziriswa zvinyorwa chizvarwa chikamu che-site-optimization. Zvinoreva kuti vadzidzisi vewebhu vanogona kudzora zvakakwana chikamu ichi cheSEO. Saka, usati watanga chero maitiro anobatsira eSOO, iva nechokwadi chokuti zvinyorwa zvako zvakanyatsogadziriswa uye zvakakosha kumhizha yako nekuita. Zvakare, unofanirwa kuisa mazwi ezvakakosha muhutano hwako kuitira kuti zvioneke kutsvaga bots. Ndinokukurudzira kuti uise wepamusoro-guru uye mabhizimusi-kuwana mazwi makuru mumazita uye pakutanga kwemavara. Uyezve, iwe unogona kuzvishandisa mune tsanangudzo uye ALTs.
Maererano nekutsvakurudza kwemazuva ano, Google yakakwirira mapeji iwayo ane mashoko anopfuura 2 000 + mavara mapeji ane zviduku uye zvinyoro zvishoma sezvavanowanzoita hazvibatsiri kune vashandisi vepakati 'ruzivo. Ndicho chikonzero ndinorayira kunyora mapeji 2-3 marefu nenyaya yekugadzirisa, semuenzaniso, nhanho-nhanho-mirayiridzo, zvidzidzo kana mazano. Kutsvakurudza kunoratidzawo, kuti zvinyorwa zvemashure uye zvakasvibirira zvinowanzoita kuti zviwanike kune magwaro maduku. Pakupedzisira, ichakubatsira iwe kuvaka nhamba yakawanda yezvibatanidza zviri mukati peji peji rimwe nerimwe Source .